Farmaajo :- Al-shabaab wadahadal ayaan la furaynaa hadii fikirka ajabanbiga ah kalaabtaan. | AllPuntland.net
Farmaajo :- Al-shabaab wadahadal ayaan la furaynaa hadii fikirka ajabanbiga ah kalaabtaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fadaraalka ah ee soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaaahi Farmaajo ayaa markale xalay ku dhawaaqay in ay dowladdu diyaar u tahay in ay wadahadal lagasho Ururka Al-shabaab .
Hadalkaan ayuu madaxweynu sheegay xili uu kalmada xiritaanka ah ka jeedinayay shirweynaha Dib u heshiisiinta umada soomaaliyeed ee ka socday magalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo ay ka qayb galayeen ergooyin ka socday Dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu waxaa xusay in dowladu soo dhaweynayso wadahadal nabadeed oo lala galo cid waliba oo waxtirsanaysa marka laga reebo fikradaha ka baxsan soomaalinimadda ee salka ku haya colaada iyo gumaadka shacabka aan waxba galabsan .
Dhinaca kale madaxweynaha ayaa ka codsaday in qaybaha bulshada dhamaantood ay is cafiyaan , si soomaaliya midaysan loo helo madaama dunidu la yaabantahay kala qaybsanaanta waqtiga badan qadatay ee u dhaxaysa shacabka soomaaliyeed.